रोचक बिचित्र – Page 8 – JanaSanchar.com
छोराको १४ वर्षको साथीबाट आमा गर्भवती भएपछि…
एजेन्सी। यो समाचार पढेपछि तपाइँलाई के यकिन हुन्छ भने वास्तवमा प्रेम अन्धो नै हुन्छ। जब एक महिलाले हालै दिएको एक अन्र्तवार्तामा आफ्नो जीवनको अनौठो राज खोलेपछि प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने राज खुलेको हो। मिररका अनुसार अमेरिकाको जर्जियाकी लीसा क्लार्कले आफू ३६ वर्षकी हुँदासम्म आफ्नो जीवन निकै दुखका साथ बितिरहेको बताएकी छन्। उनको आफ्नै छोरा..
खेत जोत्दाजोत्दै किसान बने करोडपति, खेतमा भेटियो यस्तो खजाना
एजेन्सी। इङल्याण्डका एक किसान खेत जोत्दाजोत्दै केही समयमै करोडपति बनेका छन् । यहाँका एक किसानको खेतमा करोडौंको खजाना भेटिएको छ । यहाँका एक ट्रेजर हन्टरले मेटल डिटेक्टरको सहायताले यति ठूलो खजाना भेट्टाएका हुन् । ३५ वर्षका ट्रेजर हन्टर माइक स्मेलले ब्रिडपोर्टमा एक किसानको खेतमा यति ठूलो खजना खोजी गरेका थिए । यी सिक्काहरु रोमन..
अब जान्नुहोस्, के कारणले कुकुर जहाँसुकै सम्भोग गरिरहेका भेटिन्छन्
के तपाईंले कहिल्यै कुकुरले सम्भोग गरिरहेको देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छैन भने पनि अब दसैंताका यस्ता दृष्यहरु छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । असोज र कात्तिक महिनालाई कुकुरहरुका लागि बैंस चढ्ने वा सहबास गर्ने महिना भनेर भनिन्छ । यो कहानी महाभारत युगदेखि प्रचलित छ । द्रौपदीको विवाह कसरी पाँच भाइ पाण्डवसँग हुन गयो भनेर यसअघि नै पढिसक्नु..
सिनो खाने मान्छे : जसले ६३ वर्षदेखि नुहाएका छैनन्
एजेन्सी । नेपाल भन्दा धेरै अगाडी विकसीत मानिएकोैं इरानमा एक यस्ता व्यक्ति छन्, जो संसारका आममान्छेभन्दा उल्टा छन् । उनी ६३ वर्षदेखि नुहाएका छैनन् । ८३ वर्षीय अमोउ हाजी जसको शरीरमा मैलोको मोटो पत्र जमेको छ । तर, अमोउ भन्छन्, ‘यही फोहोरका कारण ८३ वर्षदेखि म स्वस्थ छु ।’ फोहोरकै कारण लामो जीवन जिउन सकेको उनी तर्क गर्छन् । ननुहाएकै कारण उनी..
एउटै अण्डाबाट जन्मिए हाँसको जुम्ल्याहा चल्ला
चराको एउटा अण्डा भित्रबाट जुम्ल्याहा चल्ला कोरलिएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । तर क्यानडामा यो घटना भएको छ । क्यानडामा एउटा हाँसको अण्डाबाट जुम्ल्याहा चल्ला निस्केका छन् । दुःखद कुरा के भने यी जुम्ल्याहा चल्लाको जिउ भने जोडिएको छ । क्यानडाको नोभा स्कोटियाकी अम्बर ब्रानेनले इन्कुबेटरमा कृत्रिम रुपमा हाँसको..
पञ्चायतले दियो किशोरीलाई बलात्कार गर्न आदेश , २० जना पक्राउ
पाकिस्तानको मुल्तानमा एक किशोरीमाथि बलात्कारको आदेश दिएको आरोपमा २० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । युवतीको दाइले एउटी बालिकामाथि बलात्कार गरेका थिए, र त्यसैको बदलास्वरुप पञ्चायतले यो आदेश दिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार दुवै पीडितका परिवार नातेदार हुन् । दुवै परिवारका व्यक्तिहरुले मिलेर यो आदेश दिएको बताइएको छ । प्रहरी..
पञ्चायतको आदेशअनुसार परिवारकै सामू किशोरीको भयो बलात्कार,बलात्कारको बदलामा बलात्कार !
एजेन्सी , साउन १२ । पञ्चायतको आदेश अनुसार बलात्कारको बदलामा बलात्कार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तस्थित मुजफ्फरावादको राजपुर गाउँमा पञ्चायतको आदेश अनुसार एक १६ वर्षीय किशोरीलाई उनकै परिवारका सामू बलात्कार गरिएको हो । पीडित किशोरीका दाजुले केही अघि छिमेकी एक किशोरीलाई बलात्कार..
यौन कर्ममा लिप्त जोडीको भिडियो हेलिकप्टरबाट खिचिएपछि
एजेन्सी । आफ्नो बगैंचामा सेक्स गरिरहेको एक जोडीको प्रहरीको हेलिकप्टरबाट भिडियो खिचिएको मामलामा अदालतमा सुनुवाई सुरु भएको छ । यो घटना बेलायको दक्षिणी इलाका योर्कशरको हो । सो घटनाका सम्बन्धमा योर्कशरका दुई प्रहरी अधिकारी र दुई जना पाइलटविरुद्ध शेफिल्डको क्राउन कोर्टमा सुनुवाई सुरु भएको हो । ४२ वर्षीय मैथ्यु लुकास, ४७ वर्षीय ली..
यी पिता यस कारण गोरुको साटो आफ्ना दुई छोरीलाई हलो जोताउँछन्
पोखरा/ भारतभरि विगत कैयौं दिनदेखि किसानहरू ऋणमाफीका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेशमा किसानहरू आफ्ना मागका साथ सडकमा उत्रेका छन् । यसैबीच मध्यप्रदेशको वसन्तपुर गाउँमा आर्थिक कठिनाइका कारण गोरु किन्न नसकेर एक आदिवासी गरीब किसानले आफ्नो नाबालक दुई छोरीलाई हलो जोताएको कारुणिक खबर आएको छ । विगत दुई वर्षदेखि यी..